Mpanamboatra sy mpamatsy mpanohitra IR Beam - China IR Beam Counter Factory
Ny olona mandeha ho azy MRB dia mifanohitra amin'ny HPC005S
MRB Auto olona mpanohitra sensor HPC005S (kinova fampidinana mivantana) Tsy toy ny HPC005, mpanohitra olona mandeha ho azy HPC005S afaka mamindra angona ho rahona tsy misy PC. Kaontera olona mandeha ho azy ity izay azo ampitaina tsy misy WIFI, maro amin'ireo mpanohitra olona mandeha ho azy no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana vaovao misimisy kokoa momba ny kaonteran'ny olona mandeha ho azy. Ao amin'ny ...
Ity dia kaontera varavarana iray tena tsotra izay mandeha amin'ny batterie ihany. Betsaka amin'ireo kaonteran'ny varavarantsika no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasa anao antsipiriany misimisy momba ny kaonteram-baravaranay. Ny isan'ny fikorianan'ny mpandeha no mpitondra lehibe indrindra eo amin'ny tsena amin'izao fotoana izao. Eo ambanin'ny fitaoman'ny toerana ara-jeografika, tontolo iainana, fifamoivoizana ary anton-javatra hafa, ny fandalinana sy ny statistikan'ny isa passeng ...
Kaontera fifamoivoizana MRB ho an'ny olona antsinjarany manisa HPC002
Ity dia fivarotana fifamoivoizana an-tsena izay azon'ny bateria sy herinaratra ampiasaina. Ny ankamaroan'ny fivarotana fivarotana antsinjarany dia vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana vaovao misimisy kokoa momba ny fivarotana fivarotana antsinjarany. Ny isan'ny fivezivezena amin'ny mpandeha dia famantarana lehibe amin'ny asan'ny fivarotana eny an-tsena. Amin'ny asa isan'andro, azontsika atao ny mitsara mivantana ny kalitaon'ny asan'ny fivarotana eo amin'ny tsena ...
Masinina fanisana olombelona MRB USB ho an'ny HPC015U antsinjarany
Ity dia milina fanisana olombelona mora vidy sy azo ampiharina. Maro amin'ireo sensor momba ny fanisana ataon'olombelona no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana vaovao misimisy kokoa momba ny sensor manisa olombelona. Ny vidin'ny fametrahana ny sensor manisa olombelona HPC015U dia ambany dia ambany, tsy misy fananganana, fametrahana haingana, ary tena mety amin'ny foibe foibe goavambe hanatanterahana olombelona marina ...
Ny maro amin'ireo fivarotan-tongotsika dia vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana vaovao misimisy kokoa momba ny latabatra fivahiniananay. Ampiasainay ity sensor sensor ho an'ny tongotra ity, mba hanomezana vahaolana vahaolana haingana sy tsotra ary mahomby ho an'ny tranomboky, tranombakoka, toerana mahafinaritra, fivarotana rojo vy, fivarotana lehibe, ary toerana hafa eto an-toerana sy any ivelany. Azo ampiasaina amin'ny automa koa ity kaontera fandehanan'ny tongotra ity ...
Ny olona nomerika nomerika MRB dia mifanohitra amin'ny HPC005U
Ity dia mpanelanelana nomerika nomerika tsotra izay afaka manondrana angona amin'ny alàlan'ny USB, maro amin'ireo mpanelanelana nomerika anay no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana vaovao misimisy kokoa momba ny kaonteran-tserasera ataonay. Ny fitantanana ara-tsiansa ny tsena maoderina dia miankina amin'ny angon-drakitra hiteny. Ny angon-drakitra marina dia ahafahan'ny mpampihatra mahatakatra fampahalalana marina sy angon-drakitra voalohany, ary afaka manao ...
Ity dia mpanohitra olona tsy misy tariby izay azo ampitaina tsy misy WIFI, maro amin'ireo mpanisa anay no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasao aminao antsipiriany misimisy momba ny kaonteran'ny olona anay. Amin'ny vanim-potoanan'ny angona lehibe, ny People counter dia mahatonga ny angon-drakitra ho marina kokoa ary manamora ny fandraharahana. Ny latabatra infrared people dia mety amin'ny tranomboky, gara lalamby haingam-pandeha, fivarotana finday, marika talenta ...